Samsung Ace Plus S7500 ကို Root လုပ်မယ်… – Myanmar Mobile App Edition: Myanmar | ပြည်တွင်းပြည်ပမုိုဘိုင်းသတင်းများ
Monkey Boxing v1.05 Apk Game 16MB bootloader lock , unlock chacker tool InstaPlace Pro v1.1.4 for android(latest version) Call Recorder Pro v1.9 for android(latest version) Zico: The Official Game Home
Published On: Tue, Mar 12th, 2013 Android Tutorials / Android ဖုန်း root လုပ်နည်းများ / မိုဘိုင်းဖုန်းဆိုင်ရာ Tutorials | By JojOe (KOThu) Samsung Ace Plus S7500 ကို Root လုပ်မယ်…
ဒီတခါတော့ tutorial လေးတခုတော့ရေးမယ်ဗျာ Root လုပ်နည်းလေတခုပေါ့..အဲဖုန်းလေးကထွက်တာတော့နည်းနည်းကြာပီလို့ပြောရမလားပဲဗျ…
ဒီမှာလဲတင်ထားတာမတွေ့သေးလို့ဗျ…. Samsung Galaxy Ace Plus S7500 ကို… Root လုပ်နည်းလေးပါ…ကဲအရင်ဆုံးလိုတာတွေဒေါင်းလိုက်ဗျာ….
လိုရမယ်ရ….Samsung Driver ယူရန်…
Odin3v3.04 ယူရန်…
CWM Recovery For Ace Plus ယူရန်… update.zip ယူရန်….
[ update zip ကရှိပြီးသားဆိုဒေါင်းမနေပါနဲ့...နာမည်တော့ကွဲနေမယ်ထင် တချို့ကတော့ Root.zip တဲ့ တချို့ကတော့ universal gb root.zip တဲ့...ကျနော်ကတော့ update.zip လို့ပဲပေးလိုက်မယ်အမှန်က... superuser.zip ဗျ.. လေရှည်တာ...ရှိပီးးသားဆိုထပ်ဒေါင်းနေမှာစိုးလို့...ကွန်ကအရမ်းကောင်းတယ်မှတ်လားး... ]
လိုတာတွေဒေါင်းပြီးးရင်…Floder တခုဆောက်ပီးးအကုန်ပေါင်းထည့်ထားးးလိုက်ဗျာ….အဲ Driver ကိုတော့အရင်သွင်းထားလိုက်…ပြီးရင် update.zip လေးကိုတော့ SD Card ထဲကူးထည့်ထားလိုက်..ပြီးရင်ဖုန်းထဲပြန်ထည့်ထား CWM Recovery ကိုဖြည်လိုက်ဗျာ…clockworkmod-5.0.2.8.tar.md5 ဆိုတာလေးရမယ်….ခနထားးး.. Screenshot လေးတွေလဲကြည့်နော်..ဖုန်းကိုပါဝါပိတ်… Vol Down+Home+Power တွဲနှိပ်ထားလိုက်..ပုံ ၁ အတိုင်းလေးလာရင်Vol up နှိပ်လိုက် Download Mode ခေါ် Odin Mode သို့ရောက်ရှိပါပြီ….(ပုံ၂)
ဒါဆိုကွန်ပြူတာနဲ့ချိတ်လိုက်တော့ဗျာ…. ODin ကိုဖွင့်လိုက်.. Odin က ID:COM အကွက်မှာအရောင်လေးထွက်နေရင်ကွန်နဲ့ဖုန်းသိနေပီ…ဆက်လို့ရပီအရောင်မထွက်သေးရင် Driver သေသေချာချာပြန်သွင်းပါ…အိုကေရင်ဆက်မယ်..
Odin က PDA အကွက်မှာ clockworkmod-5.0.2.8.tar.md5 လေးရွေးပေးလိုက်…ပြီးရင်… Start ခလုတ်လေးနှိပ်လိုက်တော့သူစပြီး Recovery သွင်းပါမယ်. ID:COM အပေါ်အကွက်မှာPASS ပြသွားရင်အဆင်ပြေပြီ….ပုံတွေကြည့်….PASS ပြသွားပြီဆိုရင်တော့ S7500 မှာ CWM သွင်းပြီးသွားပြီ…CWM ထဲဝင်ဖို့ Vol Up+vol Down+Power+Home ခနတွဲနှိပ်ပြီးဝင်ပါမယ်…
Recovery ထဲရောက်ရင်တော့ vol ခလုတ်နဲ့ Move လုပ်ပြီးး Home ခလုတ်နဲ့ install zip from SD ကိုဝင်…Choose zip from SD>>external_sd>>update.zip လေးကိုရွေးပေးလိုက်ပါ…. update zip ကို Flash ပါလိမ့်မယ်.. Complete ဖြစ်ရင်… reboot system now ရွေးပေးလိုက်ပါ…ဖုန်းပြန်တက်လာရင်.. Superuser နဲ့အတူ S7500 ဟာ အမြစ်နှုတ်လို့ပြီးပါ…ပြီ…
On da FB >> Oo JojOe
28 comments on “Samsung Ace Plus S7500 ကို Root လုပ်မယ်…”	pilay on March 12, 2013 at 1:47 pm said:
အကိုရေ..ကျနော့်ဖုန်း(Samsung Ace Plus S7500)က Root လုပ်လိုက်တာ ဖုန်းက ပုံ၁ အောက်ဘက်က အ၀ါရောင်တြိဂံပုံလေး အရင်တက်လာပြီးမှ စက်ကတက်သွားတယ်.. အဲဒါဘာဖြစ်တာလဲဆိုတာ ပြောပြပေးပါလား..
Reply ↓	kokogyi on March 14, 2013 at 9:34 am said:
custom ပြောင်းသွားလို့ အ၀ါရောင်တြိဂံပုံလေးပေါ်တာ
official ပြန်တင်လိုက်ရင် အ၀ါရောင်တြိဂံပုံလေးမပေါ်တော့ဘူး
Reply ↓	Aung Aung on March 12, 2013 at 2:03 pm said:
အကိုေ၇ Huawei U8510 Root လုပ်နည်း ကျေးဇူးပြုပြီးပြောပြပေးပါခင်ဗျာ
Reply ↓	waiyan on March 16, 2013 at 2:17 am said:
Automatic Root Enabler (U8510) v1.1 exe
Reply ↓	ကောင်းကောင်း on March 12, 2013 at 3:09 pm said:
Ace plus ရေ…Jelly bean မျှော်ရတာမောလှါပြီကွယ်
Reply ↓	koungkoung on March 12, 2013 at 5:47 pm said:
အကိုရေ samsaung Ace Plus GT-S5830i အတွက်ရော recovery image ဖိုင်ကဘယ်က download ဘယ်မှာဆွဲရမှာလဲခင်ဗျာ
Reply ↓	JojOe (KOThu) on March 18, 2013 at 7:49 am said:
http://www.mediafire.com/download.php?skhmamw8pu6zduc s5830i အတွက်ပါ…အကို
Reply ↓	koungkoung on March 12, 2013 at 6:04 pm said:
အကိုအပေါ်မှာပေးထားတဲ့ update .zip ဖိုင်က Ace Plus GT-S5830i အတွက်လည်း လုပ်လို့ရလားခင်ဗျာ
Reply ↓	JojOe (KOThu) on March 18, 2013 at 7:41 am said:
Reply ↓	koko on March 14, 2013 at 4:02 am said:
Reply ↓	kokogyi on March 14, 2013 at 9:36 am said:
Reply ↓	jamenaing on March 14, 2013 at 7:59 am said:
Please how to root Vivo E1t
Reply ↓	kyawnaingoo on March 18, 2013 at 10:41 am said:
အစ်ကိုရေ samsung Ace Plus s7500 firmware လုပ်ချင်လို့ လင့်လေးများရှိရင်တင်ပေးပါလား
Reply ↓	ရာဇာ on March 18, 2013 at 5:09 pm said:
အစ်ကို ကျနော် အစ်ကို့ရဲ့ကူညီကို တကယ်ကိုလိုအပ်နေပြီး အစ်ကိုသာ မကူညီရင် ကျနော်ဖုန်း system ဖျတ်ပြီးထင်တယ် ကျနော်ဖုန်းက ace plus gt-s7500 ပါ root လုပ်လိုက်လို့ cwm-based recovery v5.0.2.8 ကို ဟို zip ကိုလည်း install from sdcard complete ပြီးတော့reboot system now ကို နှိပ်လိုက်တယ် ဖုန်းပြန်ဖွင့်တဲ့ အချိန်မှာ cwm-based recovery v5.0.2.8 ဒီနေရာကိုပဲ ပြန်ရောက်တယ် ဖုန်းလည်း ဖွင့်လို့မရတော့ဘူး
ကျေးဇူးပြုပြီး ကျနော်ကို ကူညီပါနော် အစ်ကိုသာ မကူရင် ဒီဖုန်း သုံးလို့ရတော့မှာ မဟုတ်ဘူး please please please
Reply ↓	ရာဇာ on March 18, 2013 at 5:11 pm said:
ကျေးဇူးပြုပြီး ကျနော်ကို ကူညီပါနော် အစ်ကိုသာ မကူရင် ဒီဖုန်း သုံးလို့ရတော့မှာ မဟုတ်ဘူး please please please ဖြစ်နိုင်ရင် ဆင်ပြေမယ် နည်းလမ်းလေး မြန်မြန်ပြောပေးပါ
Reply ↓	ရာဇာ on March 18, 2013 at 5:16 pm said:
ကျေးဇူးပြုပြီး ကျနော်ကို ကူညီပါနော် အစ်ကိုသာ မကူရင် ဒီဖုန်း သုံးလို့ရတော့မှာ မဟုတ်ဘူး please please pleaseအစ်ကို ကျနော် အစ်ကို့ရဲ့ကူညီကို တကယ်ကိုလိုအပ်နေပြီး အစ်ကိုသာ မကူညီရင် ကျနော်ဖုန်း system ဖျတ်ပြီးထင်တယ် ကျနော်ဖုန်းက ace plus gt-s7500 ပါ root လုပ်လိုက်လို့ cwm-based recovery v5.0.2.8 ကို ဟို zip ကိုလည်း install from sdcard complete ပြီးတော့reboot system now ကို နှိပ်လိုက်တယ် ဖုန်းပြန်ဖွင့်တဲ့ အချိန်မှာ cwm-based recovery v5.0.2.8 ဒီနေရာကိုပဲ ပြန်ရောက်တယ် ဖုန်းလည်း ဖွင့်လို့မရတော့ဘူး
ကျေးဇူးပြုပြီး ကျနော်ကို ကူညီပါနော် အစ်ကိုသာ မကူရင် ဒီဖုန်း သုံးလို့ရတော့မှာ မဟုတ်ဘူး please please please အဖကြို ကျနော့်မေလ်ကို ပို့လာလို့ရလားcrazygtalk9@gmail.com
Reply ↓	မိုးညိုသား on April 15, 2013 at 5:40 am said:
ညီရေ firmware ပြန်တင်လိုက်ပါ…
Reply ↓	myo myint tun on March 18, 2013 at 8:12 pm said:
အကို ကျွန့် တော့်ဖုန်းsamsung gio GT5660 ကို
version မြင့်ချင် လို့ version မြင့်တဲ့software
တင်ပေးလို့ ရလားမသိဘူး ရရင်လုပ်နည်းလေးပါတင်ပေးပါလားအကို
Reply ↓	kaung lay on April 1, 2013 at 9:25 am said:
GIO က မြှင့်လို့မရသေးပါဘူး။
Reply ↓	ချစ်ကိုဦး on March 22, 2013 at 11:23 am said:
ကျွန်တောဖုန်းက Root လုပ်လိုက်တာ Power မပြန်တက်တော့ဘူး ပျက်သွားပြီလားမသိဘူး
Reply ↓	kaung lay on April 1, 2013 at 9:26 am said:
မဖြစ်နိုင်လောက်ပါဘူး။ Recovery mode ဒါမှမဟုတ် CWM ထဲဝင်ပြီး Wipe data နဲ့ wipe cache လုပ်လိုက်ပါ၊ ဒါဆိုရင်
Reply ↓	အောင်ကျော်သန်း on March 24, 2013 at 2:42 am said:
ှSamsung Galaxy S Advance GT-I9070 v 2.3.6 ရဲ့ firmwares တင်နည်းလေး တင်ပေးပါလား ခင်ဗျာ။ တစ်ခါမှ ကိုယ်တိုင် မလုပ်ဖူးတော့ အစ်ကိုတို့ တင်ပေးထားတဲ့ official firmwares download လုပ်ပြီးပေမယ့် လုပ်ဆောင်နည်း တင်မထားတော့ မစမ်းသပ်ရဲလို့ပါ။
Reply ↓	kaung lay on April 1, 2013 at 9:29 am said:
လွယ်ပါတယ်။ Firmware ရှိနေရင်၊ zip ဖိုင်ကို extract လုပ်လိုက်ပါ၊ ပြီးရင်၊ သူနဲ့ကိုက်မယ့် Odin ထဲမှာ ရွေးထည့်ပေး၊
ပြီးရင်၊ ဖုန်းကို စက်ပိတ်၊ downloading mode ထဲဝင်ဖို့၊
Home button+Volume down button+power button တို့ကိုတွဲနှိပ်ထားပါ။ ပီးရင်၊ ကွန်ပျူတာနဲ့ ဖုန်းနဲ့ချိတ်၊ Odin မှာ အ၀ါရောင်ပြနေရင်၊ Start ကိုနှိပ်လို့ရပါပီ၊ အနည်းဆုံး၊ ငါးမိနစ်တော့ကြာပါမယ်။ ဒါဆိုရင်ရသွားပါပီ၊
Reply ↓	ko thu lay on March 24, 2013 at 2:45 am said:
Reply ↓	LwinOo on March 29, 2013 at 9:03 am said:
Odin3-v3.04.zip က down လို့ မရဘူးဖြစ်နေတယ် အကို
Reply ↓	Pirate on April 4, 2013 at 11:22 am said:
ကျေးဇူးပြုပြီး ace plus firmware တင်နည်းပြောပြပေးပါ
Reply ↓	nay min on April 11, 2013 at 6:58 pm said:
is it work on Samsung Galaxy Ace Plus GT s7500L…
Reply ↓	tun zaw on May 4, 2013 at 12:59 pm said:
odin သုံးတာအဆင်မပြေဘဲ power,download mode & recovery mode ပါ ဝင်လို့မရတော့တဲ့အခါ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ရှင်းပြပေးပါလား အကို..လိုအပ်တာကိုလဲ ဒေါင်းဖို့ပါ လင့်ပေးပါဦးဗျာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကို
than zaw lin on Samsung galaxy S3(GTI9300) သမားများအတွက် 4.2.2 official jellybean leaked firmware ထွက်ရှိလာပါပြီ..ye on Fire & Forget Final Assault For Pc Game 110MBAung Bo Shine on Adobe Photoshop CS6 For Pc 161MBsithuthein on Samsung galaxy S3(GTI9300) သမားများအတွက် 4.2.2 official jellybean leaked firmware ထွက်ရှိလာပါပြီ..mgmgwaigyi on ImTOO iPhone Apps Transfer 1.3.1 For Pc Android Development